Khulisa ibhizinisi lakho nge-Airbnb
Hlela ikusasa lokuvakasha ngamathuluzi okubungaza aphumelelayo
Umphakathi wokuvakasha womhlaba wonke
Finyelela umphakathi wezivakashi ezifuna ukubungazwa okucatshangelwe
I-Airbnb ingungqa-phambili ekuqasheni indawo yesikhashana futhi isisizile sakhuphula ukubhukhwa phakathi nenkathi yokuvakasha.”
U-Galen Newman, i-Sandbanks Vacations & Tours
Kubalulekile ngathi ukuba sifune abantu abasidingayo, futhi i-Airbnb isisiza sifinyelele abantu abengeziwe abafuna okuthile okuyingqayizivele.”
U-Jessie Burke, i-Society Hotel
Amathuluzi endlela osebenza ngayo
Sebenzisa ngokugcwele izindlu ngokusemandleni akho ngezici eziphumelelayo
Izici eziklanyelwe ukusebenza kahle
Sakhe ukusebenza okusha kokukusiza usebenzise ngokugcwele ibhizinisi lakho ku-Airbnb. Buyekeza izindlu eziningi ngasikhathi sinye, setha amanani nemithetho yokutholakala, futhi ulawule ukubhukha ngokusemandleni akho––konke nge-inthafeyisi elula.
Funda ngamathuluzi abantu abaphumelelayo
Izindlela ezengeziwe kunanini ngaphambili zokuxhuma
Ngena ezicini eziphakeme ngokuqondile kupulathifomu yethu noma ngesofthiwe etholakalayo. Sisebenza ngenethiwekhi yomhlaba wonke yabahlinzeki besofthiwe, ngakho ungaxhuma futhi ulawule ibhizinisi lakho ku-Airbnb. Abalingane Besofthiwe Yethu Esiyincamelayo bayalusekela uhlelo lwethu oluphelele esisebenza ngalo.
Hlola uhlu olugcwele lapha
Uvunyelwe ukufaka futhi wenze amakhomishini aphansi azokusiza uqalise
Faka ngokuqondile ku-Airbnb
Buyekeza uhlu lwethu lwabalingane abaxubile
Konke ukusekela okudingayo
Thola amacebiso noma ukusekela kubhulogi yethu ethimbeni lethu lomhlaba wonke
Amathuluzi nezici zokuphumelela
Sifake amathuluzi nezici zokusiza noma ubani onesifiso sokwamukela izivakashi okubabazekayo.
Ihhotela likhanga izivakashi ezintsha
I-Airbnb isize i-Society Hotel labungaza izivakashi ezifuna okokuzithokozisa okuyingqayizivele.
Umlawuli Wendlu ukhuphula imali engenayo
I-Sandbanks ikwazile ukukhuphula imali eyitholayo ngokubungaza abantu abahlala isikhashana.
Sisebenza ngenethiwekhi yabalingane besofthiwe yokulawula indlu nabalawuli besiteshi.
Buka zonke izihloko
Ubani ongasebenzisa la mathuluzi?
La mathuluzi akhelwe ababungazi abanezindlu eziningi, abalawula amaqembu, nanoma ubani onesifiso sokukhulisa ibhizinisi lokwamukela izivakashi ku-Airbnb. Lokhu kuhlanganisa abantu, abaphathi bezindlu, amahhotela adayisa izingubo, ama-b&b. Uma ungakuthandi lokho, usengabungaza kwa-Airbnb. Funda kabanzi
Yimaphi amapholisi okukhansela engingakhetha kuwo?
Ungakhetha kumapholisi okukhansela ahlukahlukene amahlanu. Sisungule izindlela ezimbili zamapholisi ezitholakalayo zababungazi abasebenzisa amathuluzi omsebenzi. Funda kabanzi
Ngixhuma kanjani ngesofthiwe etholakalayo?
Uma usebenzisa isofthiwe exhunywe ne-API ehlanganiswe ne-Airbnb, ungashicilela izindlu futhi uzilawule ngokuqondile nge-property management system (i-PMS) noma i-channel manager (i-CM). Funda kabanzi
Zithini izindleko zakwa-Airbnb?
Ubavikela kanjani ababungazi kwa-Airbnb?
Sinezici eziningana namapholisi asiza ekwakheni ukwethembana futhi kusungulwe indawo yezimakethe yomphakathi ongenazimfihlo yezivakashi nababungazi. Sidinga imininingwane eqinisekisiwe evela kubabungazi kanye nezivakashi, futhi wonke umuntu uthola ithuba lokubhala isibuyekezo ngemva kohambo ukuze izivakashi zihlale zilandisa ngokuphatha ababungazi nemizi yabo ngenhlonipho. Isiqinisekiso Sombungazi se-Airbnb sinikeza umbungazi isivikelo esingafika ku-$1,000,000 somonakalo empahleni evikelwe ezimweni ezingavamile lapho isivakashi senza umonakalo ongaphezu kwediphozithi yezokuphepha noma uma kungekho diphozithi yezokuphepha ekhishiwe. Okokugcina, i-Host Protection Insurance iklanyelwe ukuba ikuvikele ekulandiseni lapho izivakashi zakho zilimala noma zilimaza impahla. Kufakwa ngokuzenzakalelayo njengengxenye ye-akhawunti yakho ye-Airbnb. Funda kabanzi
Ngikhokhelwa kanjani ngokubhukha?
Udinga olunye usizo?
Ithimba labasekeli bethu emhlabeni wonke likulungele